Imihlinzo: amaChina aphindile - imihlinzo
Sithini iSkeem namhlanje:
AmaChina Aphindile – Inkwenkwana yeChina isinde ekufeni, itshayiswa yimoto
Kuthiwa lomntana ebedlala ecaleni kwendlela waze watsibela endleleni, engaqondanga kanti kukho imoto eseyi fikile. Ngentlahla akakhange onzakale, uyewatshona ngaphantsi kwayo, uyewasinda, unemikrwelo nje engephi.
Emelika kubanjwe umama ofake intshulube kwipilisi ebezipha umntwana wakhe
Lomama kufumaniseka into yokuba ebelungiselela ukhuphiswano lonobuhle obelusiza, qha waqonda into yokuba lomntwana angamthoba njani ubunzima bomzimba wakhe. Kulo matiletile waphuma neqhinga loku sebenzisa intshulube. Iyoku qatshelwa esibhedlele emveni kokuba umntwana eyewakhala ngesisu esingapheliyo. Oogqirha xa bemjonga bothuka baphantse bayo kuwa xa bebona intshulube ezingakanani ubunintsi.
Kukho mfo othile obeka isibhedlele ityala ngoku shunqulwa imilenze
Kukho ndoda ithile ebise sibhedlele, lomfo uye kwesisibhedlele engaqondanga ukuba unoku shunqulwa imilenze. Ngokuno kwakhe ebecinga yinto engephi le imphetheyo kule milenze yakhe. Ngoko ekothukeni kwakhe uqaphela ukuba man bayi shunqule imilenze yakhe. Ngoko ke usuwisha isibhedlele eso ngesi sehlo, engashiyi ke phofu nalo ebelele kwibhedi esecaleni kwakhe, ngoba yena uthe akubona ukuba ushunqulwe imilenze wacela izihlangu zakhe kugqirha. Ngoko ke naye, yena kuqala uyasuwishwa ngulomfo ngenxa yalonto.
‹ Imihlinzo: Kukho isibini esiwe eliweni sasweleka, besithatha iSelfie.	› Imihlinzo: Umbhali wencwadi uthi ukuba kunoku cuthwa inani lamadoda, zonke ingxaki zehlabathi zingaphela